अकबरे खुर्सानीले बनायो ईलामका मदनलाई करोडपति, यसरी जोडे खुर्सानी बेचेरै डेढ करोडको सम्पत्ति (भिडियो) « Etajakhabar
काठमाडौं । खुर्सानी एक लोकप्रिय तरकारी तथा मसला बाली हो । खुर्सानी सबै खालको हावापानी भएको ठाउँ र बलौटे दोमट माटोमा उपयुक्त हुन्छ । खुर्सानीको खेती पहाडी क्षेत्रमा सामान्यतया गर्मी याममा र तराई क्षेत्रमा हिउँदको समयमा गर्ने गरिन्छ । नेपालका प्राय सबै भू -भागमा अकबरे खुर्सानीको खेती हुने भएता पनि अकबरे खुर्सानी नेपालको पहाडी जिल्लाहरूमा राम्रो उत्पादन हुन्छ ।
यो भिडिओमा उनले हामीसँग आफ्नो अनुभव बाँडेका छन् । अकबरे खुर्सानी खेती कसरी गर्ने ? यसको बजार कस्तो छ ? यो कस्तो ठाउँमा हुन्छ ? मुनाफा कति हुन्छ ? लगायतका प्रश्नहरुमा उनले खुलेर जवाफ दिएका छन् । कृपया भिडिओ अन्तर्वार्ता पूरै हेर्नुहोला ।